XOG:- Shaqsiga ay kooxda Damjadiid la dooneyso inuu qabto xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shaqsiga ay kooxda Damjadiid la dooneyso inuu qabto xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya
Ma ahan mid yar dadaalka siyaasadeed iyo xusul duubka ay kooxda Damjadiid ka wadaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya, madaama ay haatan ka shaqeynayaan sidii ay markale u hanan lahaayeen kursiga ugu sareeya ee taladda dalka kaas oo ah xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Hadaba warbaahinta Bulshoweyn ayaa markii ugu horeeysay heshay shaqsiga loo carbinayo inuu guddoomiye ka noqdo baarlamaanka soo socda, islamarkaana kooxda madaxtooyada u arkaan inuu ka mira-dhalin karo yoolkooda ah in ay ku guuleystaan xilka madaxtnimada dalka, kaasoo ah wasiir ku-xigeenka wasaarrada ganacsiga ninka lagu magacaabo Maxamed Keeroow Maxamed oo u dhashay beesha Raxanweyn.
Maxamed Keeroow ayaa haatan ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wuxuuna olale xoogan ugu jiro sidii uu uga mid noqon lahaa mudanayaasha baarlamaanka la filaayo in dhawaan lasoo xulo, isaga oo wixii waqtigaa ka danbeeyana isku soo taagi doona xilka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Talaabadaan ay qaadayaan kooxda maamusha madaxtooyada Soomaaliya ee Damjadiid ayaa ah mid lid ku ah dareenka siyaasadeed ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo u arka qabashada guddoonka baarlamaanka ee beeshiisa, mid aan u cuntimin oo shaabad looga dhigay beeshaas oo kaliya, taas badalkeedana loo baahnaa inay u tartamaan sida beelaha kale ee kursiga madaxweynaha iyo qabashada xilka ra’iisul wasaaraha dalka.
Dhinaca kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa markaan doonaya in shaqsi kasoo jeeda beesha Hawiye uu ku guuleysto qabashada xilka guddoonka baarlamaanka, si jegadda ugu sareeysa dalka ay ugu tartamaan beelaha Daarood iyo Raxanweyn oo muddo dheer ku suntanaa xilalka guddoonka baarlamaanka iyo ra’iisul wasaaraha.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamed Keeroow Maxamed oo ah nin dhalinyarro wax kusoo bartay dugsiyada ay maamulaan kooxda Damjadiid ayaa wixii xiligaas ka danbeeyay ku dhex milmay siyaasadda, ilaa markii danbe loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaarrada ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.